बारा–पर्साका यी परिवारलाई खै त राहत पुगेको, राहत बाँड्नेहरुको आँखा यता नपुगेको हो ? (तस्बिरमा हेर्नुहोस् एउटा झुलभित्र रात काटेको दृश्य)
Posted on April 5, 2019 by T NP
काठमाडौं, २२ चैत । गत आइतबार साँझ खाना पकाएर खाने बेला आएको हावाहुरी र भुमरीले बारा र पर्साका स्थानीयहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।
हावाहुरीले उडाएर स्थानीयको लत्ताकपडा कता पु¥यायो अत्तोपत्तो छैन । खानेकुरा केही छैन । बस्ने बाससमेत छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था, एनजीओ–आईएनजीओ, व्यक्तिगत रूपमा पनि पीडितहरूलाई राहत दिने र घोषणा गर्ने क्रम जारी छ । तर राहत कता गइरहेको छ कसैलाई थाहा छैन ।
बारामा देखिएको यो दृश्य (तस्बिर) ले पीडितहरू कुन अवस्थामा आफ्नो दैनिकी गुजारिहेका छन् भन्ने छर्लंग हुन्छ । वीरगन्जका पत्रकार भूषण यादवले घटनास्थलमा बिहान खिचेर फेसबुकमा राखेको तस्बिरले कसको मन रुँदैन र ?
तस्बिरमा पाँच–सातवटा झूलभित्र विस्तारा लगाइएको छ । चिसो भुइँमा एउटा पातलो पालमाथि तन्ना ओछ्याइएको छ । ओढ्ने पनि गतिलो छैन । झूलबाट शीत सिधै भित्र पस्छ । अझ पानी परेका बेला त झूलको कुनै महत्व नै हुँदैन ।
पीडितहरू यसरी बाँचिरहे पनि उनीहरूको नाममा राहत संकलन गर्ने जमात भने बढेको बढ्यै छ । अहिले त्यहाँ वास्तविक पीडितले भन्दा पनि गैरपीडितले राहत बुझ्नको कुरा यस तस्बिरबाट प्रष्ट हुन्छ ।
मन्दिर उत्खननको क्रममा कीर्तिपुरमा भेटियो लिच्छवीकालीन मूर्ति
ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, अर्का एक गम्भीर घाइते